Geerida Burci Maxamed Xamsa oo la xaqiijiyay iyo mas’uuliyiin ka tacsiyeeysay geerida marxuumka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Geerida Burci Maxamed Xamsa oo la xaqiijiyay iyo mas’uuliyiin ka tacsiyeeysay geerida marxuumka
MAREEG 26 June 2016
Waxaa la xaqiijiyay Allaha u naxariistee geerida Wasiiru Dowlihii Xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya ee Arimaha Bay’adda Burci Maxamed Xamza.
Allaha u naxariistee wasiirka ayaa la sheegay in uu ku dumay qolkii uu ka daganaa hotelka Naasahablood 1 oo shalay ay weerareen maleeshiyaadka argagixisada Shabaab.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Abdusalam Hadliye Omer, Wasiiru dowlaha Khaled Omar Ali , Wasiir ku xigeenka Ahmed Ali Mohamed “ Kadiye” , Xoghayaha joogtada Wasaaradda Danjire Ali Mohamed Ali, Agaasimayaasha Waaxyaha, Safiirada, Qunsulada guud , La taliyeyaasha Wasaaradda iyo dhammaan Saraakiisha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ayaa ka tacsiyeeyay geerida marxuum Xamsa.
Marxuum Burci Maxamed Xamsa oo xilal kala duwan ka soo kala qabtay dowladihii kala duwanaa ee dalka soo marayay si gaar ah Wasaaradaha Deegaanka, Maaliyadda iyo Arrimaha Dibadda, waxa uu ahaa siyaasi, macallin iyo barbaariye ku xeel dheeraa ku hadalka iyo qoridda in ka badan shan luqadood.
Qorshaha Hirgelinta iyo Jadwalka Doorashada 2016 (Akhriso)